ဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အလှတရားတွေ ထုတ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် – Shwe Nay Chi
ဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အလှတရားတွေ ထုတ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်
ပရိသတ် ကြီးရေ အသား အရည်ဖြူဝင်းလှပပြီး ပုရိသတို့ စွဲမက်ဖွယ် အလှတရား တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ရှင်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ သိပ်မကြာသေးပေမယ့် ပရိသတ် အများအပြားရဲ့တစ်ခဲ နက်အားပေးမှုကို ရယူပိုင်ဆိုင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယောကျာ်းလေးပရိသတ် တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုအများဆုံးရရှိ ထားတဲ့ သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရည် ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး sexy ကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေ နဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်
သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော မှာတော့ အမိုက်စားပို့စ် တွေပေးကာ ဆွဲဆောင် မှုရှိရှိ လှရက်လွန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပုံလေးတွေ တိုင်းမှာ ရှင်ယွန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှုရှိရှိနဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်းနေ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်…..မေမေ လာရင် နိုစို့မယ်….ဖေဖေ လာရင် အုန်းသီး ခွဲစားမယ်….မိုးရေထဲမှာ ထွက်ဆော့ ရတာကို ကြိုက်တယ်..သူမ ကတော့ လတ်တလော လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကိုခံ နေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက် များလာတဲ့ မော်ဒယ်အမိုက် စားလေးဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ…ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ပုံလေးကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အလှတရားတွေ ထုတ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်… ပရိသတ် ကြီးရေ အသား အရည်ဖြူဝင်းလှပပြီး ပုရိသတို့ စွဲမက်ဖွယ် အလှတရား တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ရှင်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရည် ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး sexy ကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေ နဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော မှာတော့ အမိုက်စားပို့စ် တွေပေးကာ ဆွဲဆောင် မှုရှိရှိ လှရက်လွန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးတွေ တိုင်းမှာ ရှင်ယွန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှုရှိရှိနဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်းနေ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်…..မေမေ လာရင် နိုစို့မယ်…. ဖေဖေ လာရင် အုန်းသီး ခွဲစားမယ်…. မိုးရေထဲမှာ ထွက်ဆော့ ရတာကို ကြိုက်တယ်..သူမ ကတော့ လတ်တလော လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကိုခံ နေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက် များလာတဲ့ မော်ဒယ်အမိုက် စားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲ…ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ပုံလေးကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့တံဆိပ်အကပ်မခံနိုင်လို့ ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
မနိုင်တနိုင်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးဆူခါ ကိုယ်လုံးလေး လှစေဖို့ အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း (ဗီဒီယိုဖိုင်)